Porn အသုံးပြုမှုအပေါ်အာရုံကြောလေ့လာရေး - အဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ
ပင်မစာမျက်နှာ Porn အသုံးပြုမှုအပေါ်အာရုံကြောလေ့လာရေး
သိပ္ပံပညာရှင်များ fMRI, MRI နှင့် EEG အပါအဝင် tools တွေကိုသုံးပြီးညစ်ညမ်းများ၏သက်ရောက်မှုကိုကြည့်ဖို့အာရုံကြောလေ့လာမှုများကိုအသုံးပြုကြသည်။ သူတို့ကအစ neuro-endocrine နှင့် neuro-pyschological လေ့လာမှုများဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ဤစာမျက်နှာကိုထံမှအဆင်ပြေအောင်ထားပြီး Yourbrainonporn.com။ ကျေးဇူးပြု၍ လည်ပတ်ပါ Yourbrainonporn.com သငျသညျညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏သက်ရောက်မှုသို့နောက်ဆုံးပေါ်သုတေသနအကြောင်းကိုပိုမို In-depth သတင်းအချက်အလက်ချင်လျှင်။
အောက်ကအာရုံကြောလေ့လာမှုများနည်းလမ်းနှစ်ခုအတွက်ခွဲခြားထားပါသည်။ ပထမဦးဆုံးစွဲ-related ဦးနှောက်အားဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီကဖော်ပြခဲ့သည်ပြောင်းလဲစေပါသည်။ ကြောင်းအောက်တွင်တူညီသောလေ့လာမှုများကောက်နှုတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်. ရှင်းလင်းပြောကြားအတူစာစောင်၏နေ့စွဲဖြင့်စာရင်းပြုစုထားရှိပါသည်။
စွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲအားဖြင့် lists: စွဲအားဖြင့်သွေးဆောင်လေးကိုအဓိကဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုအားဖြင့်ဖော်ပြထားကြသည် ဂျော့ခ်ျအက်ဖ် Koob နှင့် Nora ဃ Volkow သူတို့ရဲ့မှတ်တိုင်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ Koob အရက်အလွဲသုံးမှုနှင့်အရက် (NIAAA) ရက်နေ့တွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု၏ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်ပြီး, Volkow မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု (NIDA) ရက်နေ့တွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု၏ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဆေးပညာ၏နယူးအင်္ဂလန်ဂျာနယ်ရဲ့ခဲ့သည်: စွဲလမ်းမှု၏ဦးနှောက်ရောဂါမော်ဒယ် (2016) မှ Neurobiologic တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ။ လိင်စွဲရှိကွောငျးက၎င်း၏အဖွင့်စာပိုဒ်ထဲမှာဖော်ပြနေချိန်တွင်အဆိုပါစက္ကူ, မူးယစ်ဆေးများနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်အဓိကဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုဖော်ပြထားတယ်:
Volkow & Koob စက္ကူတွင်စွဲလမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုလေးမျိုးကိုဖော်ပြထားသည်။ အသိ, 2) Desensitization, 3) အလုပ်မဖြစ် prefrontal ဆားကစ် (hypofrontality), 4) ချွတ်ယွင်းနေစိတ်ဖိစီးမှုစနစ်က။ ထိုအဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများအားလုံး4ဤစာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသောအများအပြားအာရုံကြောလေ့လာမှုများအကြားဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပြီ
သတင်းပို့လေ့လာရေး ာင်း porn အသုံးပြုသူများ / လိင်စွဲသူများအတွက် (cue-reactivity & cravings) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
ဆင်းရဲသောအလုပ်အမှုဆောင်အစီရင်ခံစာအစီရင်ခံခြင်းhypofrontalityporn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲအတွက်) သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲ prefrontal လှုပ်ရှားမှု: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
တစ်ဦးကိုညွှန်းလေ့လာရေး အလုပ်မဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်က : porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲထဲမှာ 1, 2, 3.
စာအုပျ၏နေ့စွဲဖြင့် lists: အောက်ပါစာရင်း porn အသုံးပြုသူများနှင့်လိင်စွဲအပေါ်ထုတ်ဝေရှိသမျှကိုအာရုံကြောလေ့လာမှုများပါရှိသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတစ်ခုချင်းစီကိုလေ့လာမှုဖော်ပြချက်သို့မဟုတ်ကောက်နုတ်ချက်ဖြင့်လိုက်ပါသွားနှင့်ပဲသူ့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ထောက်ခံဆွေးနွေး4စွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲ (များ) ၏အရာညွှန်ပြနေသည်:
1) compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ Impulse ပြီးတော့ Neuroanatomical လက်ခဏာ၏ပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး (မိုင်းလုပ်သား et al ။, 2009)
[အလုပ်မဖြစ် prefrontal ဆားကစ် / ဆင်းရဲသောအမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာ] - လိင်စွဲလမ်းသူများကိုအဓိကထားသော fMRI လေ့လာမှု။ လေ့လာမှုတွင်လိင်အကျင့်စွဲသူများ (hypersexuals) များ၌ထိန်းချုပ်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက Go-NoGo တွင်ပိုမိုစိတ်ရှုပ်ထွေးသောအပြုအမူများကိုဖော်ပြသည်။ ဦး နှောက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုအရလိင်စွဲသူများသည်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် prefrontal cortex အဖြူရောင်များကိုစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားခြင်းမရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ကောက်နုတ်ချက်များ
အထက်ပါ Self-အစီရင်ခံစာအစီအမံများအပြင်, CSB လူနာကိုလည်းအမူအကျင့်တာဝန်သည် Go ကို-အဘယ်သူမျှမ Go ကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပေါ်သိသိသာသာပိုပြီး Impulse ပြသခဲ့သည်။
ရလဒ်များလည်း CSB လူနာထိန်းချုပ်မှုထက်ပျံ့ (MD) ကိုဆိုလိုတာသိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားသာလွန်တိုကျရိုကျဒေသပြသခဲ့သည်ကဖော်ပြသည်။ တစ်ဦးကဆက်စပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသာလွန်တိုကျရိုကျဒေသအတိုင်းအတာနှင့်အတူ Impulse အစီအမံများနှင့်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျဒေသဒဿမကိန်း anisotrophy (အက်ဖ်အေ) နှင့် MD, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမအသင်းအဖွဲ့များအကြားသိသာထင်ရှားသောအသင်းအဖွဲ့များညွှန်ပြ။ အလားတူဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းထက်သာလွန်တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး MD နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစာရင်းများအကြားသိသိသာသာအနုတ်လက္ခဏာအသင်းအဖွဲ့ညွှန်ပြ။
2) ယောက်ျားတစ်ဦးလူနာနှင့်ရပ်ရွာနမူနာများတွင်အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုနှင့် hypersexual အပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် self-အစီရင်ခံကွဲပြားခြားနားမှု (ရိဒ် et al။ , 2010)
[ဆင်းရဲတဲ့အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့] - ကောက်နုတ်ချက်။
hypersexual လိင်အပြုအမူအတွက်အကူအညီတောင်းသောလူနာများသည်မကြာခဏစိတ်မ ၀ င်စားမှု၊ သိမြင်မှုတင်းကျပ်မှု၊ တရားစီရင်မှုအားနည်းခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများချို့တဲ့ခြင်းနှင့်လိင်နှင့်အလွန်အကျွံအလုပ်ရှုပ်ခြင်းစသည်တို့ကိုမကြာခဏပြလေ့ရှိသည်။ ဤအဝိသေသလက္ခဏာများအချို့လည်းအလုပ်အမှုဆောင်ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်အာရုံကြောရောဂါဗေဒနှင့်အတူတင်ပြလူနာအကြားဘုံဖြစ်ကြသည်။ ဤလေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရလက်ရှိ hypersexual လူနာအုပ်စု (n = 87) နှင့် hypersexual မတူသောလူထုနမူနာများ (n = 92) အကြားကွဲပြားခြားနားမှုများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအနေဖြင့်အလုပ်အမှုဆောင် - အရွယ်ရောက်ဗားရှင်း Hypersexual အပြုအမူ၏အပြုအမူအဆင့်သတ်မှတ်ချက် Inventory ကို အသုံးပြု၍ အပြုသဘောဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအလုပ်အမှုဆောင်ကမောက်ကမဖြစ်မှုညွှန်းကိန်းများနှင့် BRIEF-A ၏အများအပြား subscales နှင့်အတူ။ ဤတွေ့ရှိချက်များသည်အလုပ်အမှုဆောင်ကမောက်ကမဖြစ်မှု hypersexual အပြုအမူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်သည်ဟူသောယူဆချက်ကိုထောက်ခံသည့်ပဏာမသက်သေအထောက်အထားဖြစ်သည်။
3) အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအကဲခတ်: အင်တာနက်ကိုလိင်ဆိုဒ်များအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းများအတွက်လိင်စိတ်နိုးထ Ratings အဖွဲ့နှင့်စိတ်ဓာတ်-စိတ်ရောဂါရောဂါလက္ခဏာများ၏အခန်းက္ပ (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။, 2011)
[ သာ. ကြီးမြတ်မတရားသော / ထိခိုက်စေဆင်းရဲတဲ့အလုပ်အမှုဆောင် function ကို] - တစ်ကောက်နုတ်ချက်:
4) အလုပ်အဖွဲ့မှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူညစ်ညမ်းရုပ်ပုံထုတ်ယူခြင်း်ရောက်စွက်ဖက် (Laier et al ။, 2013)
5) ဆုံးဖြတ်ချက်-Making သဲသဲကွဲကွဲမရှိသောလက်အောက်တွင်နှင့်အတူလိင်ရုပ်ပုံထုတ်ယူခြင်း်ရောက်စွက်ဖက် (Laier et al။ , 2013)
6) ဘာစွဲ: အတွေ့အကြုံလိင်စိတ်နိုးထညစ်ညမ်းနှင့်မစစ်မှန်သောဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်စောင့်ကြည့်သည့်အခါ (ထိုကွာခြားချက်စေသည်Laier et al။ , 2013)
7) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire မဟုတ်ဘဲ Hypersexuality, (လိင်ပုံများအားဖြင့်ရူးနှမ်း Neurophysiological တုံ့ပြန်ချက်မှ Related ဖြစ်ပါတယ်သံမဏိ et al ။, 2013)
[ပိုမိုသိသာထင်ရှားခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည်လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒလျော့နည်းမှုနှင့်ဆက်နွယ်သည်] - ဤ EEG လေ့လာမှုကိုကြေငြာခဲ့သည် မီဒီယာ porn / လိင်စွဲလမ်း၏တည်ရှိမှုဆန့်ကျင်သက်သေအထောက်အထားအဖြစ်။ မရဒါ. သံမဏိ et al။ 2013 အမှန်တကယ်ဆင်း-ထိန်းညှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ porn စွဲများနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုနှစ်ဦးစလုံး၏တည်ရှိမှုဖို့ထောက်ခံမှုချေးငှားသည်။ ဘယ်လိုနည်းဖြင့်? အဆိုပါလေ့လာမှုကိုပိုမိုမြင့်မား EEG ဖတ်အစီရင်ခံတင်ပြ (ကြားနေဓါတ်ပုံတွေကိုမှဆွေမျိုး) ဘာသာရပ်များခေတ္တညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံနှင့်ထိတွေ့သောအခါ။ လေ့လာရေးတသမတ်တည်းစွဲသူတို့ရဲ့စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်သော (ထိုကဲ့သို့သောပုံရိပ်တွေကဲ့သို့) တွေကိုထိတွေ့သည့်အခါတစ်ဦးမွငျ့မား P300 ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းပြသပါ။
ယင်းနှင့်အတူအညီ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကဦးနှောက်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးလေ့လာမှုများ, ဒီ EEG လေ့လာမှုလည်းပူးပေါင်းလိင်များအတွက်လျော့နည်းအလိုဆန္ဒနှင့်အတူ correlating porn ပိုမို cue-reactivity ကိုအစီရင်ခံထားသည်။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန် - porn ပိုမိုဦးနှောက်ကို Activation နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီမဟုတ်ဘဲအမှန်တကယ်လူတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံထက် porn မှ masturbate လိမ့်မယ်။ ချောက်ခြားစရာကောင်းလောက်အောင်, လေ့လာမှုပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် နီကိုးလ် Prause "မြင့်မားတဲ့လိင်စိတ်" porn အသုံးပြုသူများသည်မျှသာရှိခဲ့ကြောင်းအခိုင်အမာမရှိသေးပါလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုပြောပါ အတိအကျဆန့်ကျင်ဘက် (ပူးပေါင်းလိင်များအတွက်ဘာသာရပ်များ '' အလိုဆန္ဒဟာသူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်းကျဆင်းနေခဲ့သည်) ။
အတူတူအဲဒီနှစျခုသံမဏိ et al ။ တွေ့ရှိချက်တွေကို (porn ပုံရိပ်တွေ) အား သာ. ကြီးမြတ်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုညွှန်ပြသော်လည်း, သဘာဝအဆုလာဘ် (ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူလိင်) ကိုလျော့နည်း reactivity ကို။ နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးစွဲအန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်။ ခြောက်လ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများအမှန်တရားရှင်းပြ: 1, 2, 3, 4, 5, 6။ ဒီကိုလည်းတွေ့မြင် ကျယ်ပြန့် YBOP ဝေဖန်မှု။
ဘာသာရပ်များခဲ့ကြသည်) 2013: ဖယ်စာနယ်ဇင်းများတွင်အများအပြားကလက်ခံတောင်းဆိုမှုများကနေ, အဲဒါကိုအလေးအနက်အတိုင်းအတာများအားနည်းချက်တွေကိုခံစားခဲ့ရအဖြစ် Prause ရဲ့ 1 ကြက်ဥလေ့လာမှု, peer-ပြန်လည်သုံးသပ်လွန်ကြောင်းစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းရဲ့ သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော (အထီး, အမြိုးသမီး, Non-လိင်ကွဲ); 2) ဘာသာရပ်များခဲ့ကြသည် စိတ်ရောဂါသို့မဟုတ်စှဲအဘို့အပြမရ; 3) လေ့လာမှုခဲ့ နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်အဘယ်သူမျှမထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စု; 4) မေးခွန်းခဲ့ကြသည် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် porn စွဲဘို့အတည်ပြုမပေး.
8) ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်အတူ Functional ဆက်သွယ်မှု Associated: Porn အပေါ်ဦးနှောက် (ကူနှင့်ဂယ်လိုင်းနတ်၊ 2014)
[desensitization, လေ့နှင့်အလုပ်မဖြစ် prefrontal ဆားကစ်] ။ မက်စ်ပန့်ခ်စ်အင်စတီကျူဒီ fMRI လေ့လာမှုကအမြင့်ဆုံးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက် ၃ ခုအားဖော်ပြခဲ့သည်။ (၁) အကျိုးအမြတ်နည်းသည့်မီးခိုးရောင်အရာ (dorsal striatum)၊ (၂) လိင်ဆိုင်ရာဓါတ်ပုံများကိုခေတ္တကြည့်ရှုစဉ်ဆုလာဘ် circuit ကို activation နည်းခြင်း၊ အဆိုပါ dorsal striatum နှင့် dorsolateral prefrontal cortex အကြား။ သုတေသီများကတွေ့ရှိချက် ၃ ခုသည်ရေရှည်ညစ်ညမ်းမှုထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ လေ့လာမှုက
အဆိုပါ PFC နှင့် striatum အကြားဆင်းရဲတဲ့ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုဖော်ပြအတွက်လေ့လာမှုကဆိုပါတယ်,
ဒီ circuitry ၏ကမောက်ကမဖြစ်မှုမသက်ဆိုင်အလားအလာအနုတ်လက္ခဏာရလဒ်၏, ထိုကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးရှာအဖြစ်မသင့်လျော်အပြုအမူရွေးချယ်မှု, ဆက်စပ်သောထားပြီး
ခဲစာရေးသူက ယင်းမက်စ် Planck သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာမှတ်ချက်ပေးဆီမှKühnကပြောပါတယ်:
ကျနော်တို့ကမြင့်မားတဲ့ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်အတူဘာသာရပ်များဆုလာဘ်၏တူညီသောငွေပမာဏကိုလက်ခံရရှိရန်တိုးပွားလာဆွလိုအပ်တယ်လို့ထင်မြင်ယူဆပါတယ်။ အဲဒီညစ်ညမ်းပုံမှန်စားသုံးမှုထက်ပိုသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသင်တို့၏အကျိုးစနစ်ကထွက်ကျီကိုဆိုလိုနိုင်ဘူး။ ဆိုလိုသည်မှာမိမိတို့အကျိုးကိုစနစ်များကြီးထွားလာဆွလိုအပျကွောငျးဿုံအဆိုပါယူဆချက် fit လိမ့်မယ်။
9) compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်မပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Cue reactivity ၏အာရုံကြောဆက်စပ် (Voon et al ။, 2014)
[sensitization / cue-reactivity and desensitization] ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်မှလေ့လာမှုတစ်ခုအရမူးယစ်ဆေးစွဲသူများနှင့်အရက်သမားများတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းမူးယစ်ဆေးစွဲသူများနှင့်အရက်သမားများတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းအပြာစွဲသူများ (CSB ဘာသာရပ်များ) တွင်အလားတူ ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုပုံစံကိုပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဦး ဆောင်သုတေသီ Valerie Voon said:
အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရှိသည်သောလူနာများအကြားဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားကွဲပြားခြားနားမှုမူးယစ်ဆေးစွဲသူများ mirror ။
Voon et al ။ , 2014 လည်းညစ်ညမ်းစွဲ fit ကိုတွေ့ ယင်းကိုလက်ခံစွဲလမ်းမော်ဒယ် "က" ကပို, ဒါပေမယ့်နောက်တဖန် "က" like နှိပ်မပေးလိုသော၏။ ကောက်နုတ်ချက်:
ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် CSB ဘာသာရပ်များ သာ. ကြီးမြတ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒရှိခဲ့သို့မဟုတ်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာတွေကိုလိုသောနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားတွေကိုပိုမိုအကြိုက်ရမှတ်ခဲ့, အရှင်လိုသောနဲ့ like နှိပ်အကြားတစ်ဦး dissociation သရုပ်ပြ
အခက်အခဲအစစ်အမှန်မိတ်ဖက်နှင့်အတူစိုက်ထူ / arousal ရရှိခဲ့သေး porn နှင့်အတူစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်နိုင်: အဆိုပါသုတေသီများလည်းဘာသာရပ်များ၏ 60% (25 ပျှမ်းမျှအသက်) ထိုသတင်းတွင်ဖော်ပြသည်။ ဤသည်ာင်းသို့မဟုတ်လေ့ဖော်ပြသည်။ ကောက်နှုတ်ချက်:
CSB ဘာသာရပ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း၏ရလဒ်အဖြစ် ... .. (မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှဆက်ဆံရေးအတွက်ပေမယ့်) မိန်းမနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအတွက်အထူးလျော့နည်းသွားလိင်စိတ်သို့မဟုတ် erectile function ကိုကြုံတွေ့ကြောင်းအစီရင်ခံ ...
10) compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်မပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်အကဲဆတ်တွေကိုဦးတည် Enhanced အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု (Mechelmans et al ။, 2014)
[sensitization / cue-reactivity] - ဒုတိယ Cambridge တက္ကသိုလ်လေ့လာမှု။ ကောက်နှုတ်ချက် -
တိုးမြှင်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု၏ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက် ... ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်စှဲပုံမမှန်အတွက်မူးယစ်ဆေးတွေကိုလေ့လာမှုတွေအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာတိုးမြှင်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်အတူထပ်နေသည်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်မူးယစ်ဆေး-cue-reactivity ကိုလေ့လာမှုများအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရကြောင်းအလားတူကွန်ယက်အတွက် [porn စွဲ] တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုမှအာရုံကြော reactivity ကို၏မကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်များနှင့်အတူဆုံနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုရန်ထစ်အငေါ့တုံ့ပြန်မှုအခြေခံစွဲ၏မက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှုသီအိုရီအဘို့အထောကျပံ့ပေး [ porn စွဲ] ။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဒီယိုများမူးယစ်ဆေး-cue-reactivity ကိုလေ့လာမှုများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိကြောင်းဆင်တူတဲ့အာရုံကြောကွန်ယက်တွင် သာ. ကြီးမြတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ကြသောငါတို့မကြာသေးမီလေ့လာရေးနှင့်အတူအံ။ သာ. ကွီးမွတျအလိုဆန္ဒသို့မဟုတ်လိုသောထက်အကြိုက်နောက်ထပ်ဒီအာရုံကြောကွန်ယက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေကိုအတူတကွ CSB အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုဆီသို့ထစ်အငေါ့တုံ့ပြန်မှုအခြေခံစွဲတစ်ခုမက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှုသီအိုရီအဘို့အထောကျပံ့ပေးသညျ။
11) အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏လိင်ကွဲအမျိုးသမီးသည်အသုံးပြုသူများအတွက်ဘာစွဲ (ဆန္ဒပြည့်အယူအဆအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါတယ်Laier et al။ , 2014)
[သာ။ ကြီးသောတပ်မက်ခြင်း / sensitization] - ကောက်နှုတ်ချက်
ကျွန်ုပ်တို့သည် IPU အမျိုးသမီး ၅၁ ဦး နှင့်အင်တာနက်မဟုတ်သောညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုသူ ၅၁ ဦး ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ မေးခွန်းပုံစံများကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေဘုယျအားဖြင့် cybersex စွဲလမ်းမှု၏ပြင်းထန်မှုနှင့်လိင်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ အထွေထွေပြproblemနာဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများပြင်းထန်မှုတို့ကိုအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံ ၁၀၀ ၏စိတ် ၀ င်စားမှုကိုနှိုးဆွပေးသည့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အပါအ ၀ င်တွန်းအား၏အညွှန်းကိန်းများအပါအ ၀ င်စမ်းသပ်မှုပုံစံကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်များအရ IPU သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပိုမိုနှိုးဆွသည်ဟုမှတ်ယူပြီး၊
ထို့အပြင်လိင်စိတ်တုန်လှုပ်ခြင်း၊ ရုပ်ပုံများကိုလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ လိင်စိတ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုထိခိုက်လွယ်ခြင်း၊ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုရှိခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော cybersex အသုံးပြုခြင်းတို့သည်ဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုစွဲလမ်းမှုနှင့်မပတ်သက်ပါ။ ဤရလဒ်သည်ယခင်လေ့လာမှုများမှလိင်ကွဲယောက်ျားများအတွက်အစီရင်ခံတင်ပြသူများနှင့်အညီဖြစ်သည်။ လိင်မှုနှိုးဆွမှု၏အားဖြည့်သဘောသဘာဝ၊ သင်ကြားမှုယန္တရားများနှင့် IPU အတွင်းဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုစွဲလမ်းမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် cue ဓာတ်ပြုမှုနှင့်တဏှာ၏အခန်းကဏ္ regarding နှင့်ပတ်သက်သောတွေ့ရှိချက်များကိုဆွေးနွေးရန်လိုအပ်သည်။
12) တစ်ဦးသိမှုအပြုအမူကြည့်ရန် မှစ. ကျဘာစွဲမှပံ့ပိုးအချက်များအပေါ်ပင်ကိုယ်မူလအထောက်အထားများနှင့်သီအိုရီကိုစဉ်းစား (Laier et al ။, 2014)
13) အသစ်အဆန်း, အခြေအနေများနှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်မှ (BANCA et al။ , 2015)
[သာ။ ကြီးမြတ်စိတ် / အာရုံနှင့်လေ့ကျင့် / လေ့ကျင့်ခန်း - desensitization] - နောက်ထပ်ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ် fMRI လေ့လာမှု။ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ညစ်ညမ်းစွဲစွဲသူများသည်လိင်ဆိုင်ရာအသစ်အဆန်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအခြေအနေများကိုဖော်ပြသည်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းစွဲစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာလေ့ကျင့်သည်။ အသစ်အဆန်းကို ဦး စားပေးကြိုတင်မတည်ရှိသေးသောကြောင့်ညစ်ညမ်းဆေးစွဲခြင်းသည်အလေ့အကျင့်နှင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုကျော်လွှားရန်ကြိုးပမ်းမှုအသစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေသည်ဟုယုံကြည်ရသည်။
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) နှိုင်းယှဉ်ပါကပုံရိပ်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဘို့တိုးမြှင်အသစ်အဆန်း preference ကိုနဲ့ဆက်စပ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှိုင်းယှဉ်ကြားနေရလဒ်များသာရှိပြီးပြည်ပမှငွေကြေးမှအေးစက်တွေကိုတစ် generalized preference ကိုခံခဲ့ရသည်။ CSB တစ်ဦးချင်းစီမှာလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသစ်အဆန်းများအတွက်ပိုကောင်း preference ကိုအတူ correlating လေ့၏ဒီဂရီနှင့်အတူငွေကြေးဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေနှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထပ်ခါတလဲလဲပိုမို dorsal cingulate လေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အသစ်အဆန်း preference ကိုထံမှ dissociable လိင်အေးစက်တွေကိုမှချဉ်းကပ်အပြုအမူတွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေတစ်ခုအစောပိုင်းအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုက CSB တစ်ဦးချင်းစီဖြစ်နိုင်သည်ဆုလာဘ်မှအေးစက်တစ် generalized တိုးမြှင့်နှင့်အတူ သာ. ကြီးမြတ် cingulate လေ့ကကမကထပြုခဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသစ်အဆန်းတစ်ခုအလုပ်မဖြစ်တိုးမြှင် preference ကိုရှိသည်ပြသထားတယ်။
14) ပြဿနာ Hypersexual အပြုအမူနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire ၏အာရုံကြောအလွှာ (Seok & Sohn, 2015)
[ပိုမိုကောင်းမွန်သောတုံ့ပြန်မှု / sensitization နှင့်အလုပ်မဖြစ်သော prefrontal ဆားကစ်များ] - ဤကိုရီးယား fMRI လေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုအခြား ဦး နှောက်လေ့လာမှုများကိုပုံတူပွားသည်။ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်လေ့လာမှုများကဲ့သို့ပင်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏ပုံစံများကိုထင်ဟပ်စေသည့်လိင်စွဲသူများအား cue-induced ဦး နှောက်ကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းပုံစံကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဂျာမန်လေ့လာမှုအတော်များများအရမူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏အပြောင်းအလဲနှင့်လိုက်ဖက်သော prefrontal cortex ပြောင်းလဲမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အသစ်သောအရာမှာတွေ့ရှိချက်များသည်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲသူများတွင်တွေ့ရသော prefrontal cortex activation ပုံစံများနှင့်ကိုက်ညီခြင်းဖြစ်သည်။ လိင်ဆိုင်ရာပုံရိပ်များကိုပိုမိုသိသာစွာတုံ့ပြန်မှုသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အဓိကလှုံ့ဆော်မှုများကိုတုံ့ပြန်မှုကိုတားဆီးပေးသည်။ ကောက်နှုတ်ချက် -
ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုဖြစ်ရပ်-related အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) နဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အာရုံကြောဆက်စပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရည်ရွယ်။ လတ်တလောတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် nonsexual လှုံ့ဆော်မှုကြည့်ရှုအားပေးစဉ် PHB နှင့် 22 အသက်အရွယ်-လိုက်ဖက်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူနှစ်ဆယ်သုံးယောက်တစ်ဦးချင်းစီ scan ဖတ်ခဲ့ကြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ဘာသာရပ်များ '' အဆင့်ဆင့်ချင်းစီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွဖို့တုန့်ပြန်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ထိန်းချုပ်မှုမှဆွေမျိုး, PHB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုထိတွေ့နေစဉ်အတွင်းပိုပြီးမကြာခဏနှင့်တိုးမြှင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒခံစားခဲ့ရသညျ။ သာ. ကွီးမွတျ activation, အ caudate နျူကလိယထဲမှာယုတ်ညံ့ parietal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး, dorsal anterior cingulate gyrus, thalamus လေ့လာတွေ့ရှိနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုထက် PHB အုပ်စု prefrontal cortex dorsolateral ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် activated ဒေသများအတွက် hemodynamic ပုံစံများအဆိုပါအုပ်စုများအကြားကွဲပြားပါတယ်။ ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်အမူအကျင့်စွဲ၏ဦးနှောက်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ၏တွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီ, PHB နှင့်တိုးမြှင်အလိုဆန္ဒ၏အမူအကျင့်လက္ခဏာများနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် prefrontal cortex နဲ့ subcortical ဒေသများတွင်ပြောင်းလဲ activation ပြ
15) "Porn စွဲ" နဲ့တသမတ်တည်းရှိမနေသောပြဿနာအသုံးပြုသူများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအတွက်လိင်ပုံများအားဖြင့်နှောင်းပိုင်းအပြုသဘောဆောင်သောအလားအလာ Module (Prause et al ။, 2015)
[လေ့ကျင့်မှု] - ဒုတိယမြောက် EEG လေ့လာမှုမှ နီကိုးလ် Prause ရဲ့အဖွဲ့။ ဒီလေ့လာမှုကမှအ 2013 ဘာသာရပ်များနှိုင်းယှဉ်လျှင် သံမဏိ et al။ , 2013 (သေးပါကအထက်အမည်ရှိတူညီသောအတိုင်းအတာများအားနည်းချက်တွေကိုခံစားခဲ့ရ) အနေနဲ့အမှန်တကယ်ထိန်းချုပ်အုပ်စု။ ရလဒ်: ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် "သူတို့ porn ကြည့်ထိန်းညှိပြဿနာများကြုံနေရတစ်ဦးချင်းစီ" vanilla ညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံများကိုတစက္ကန့်ထိတွေ့မှုမှနိမ့်ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ခဲစာရေးသူက ဤအရလဒ်များကို "porn စွဲ debunk ။ " မလုပ်ပဲသိပ္ပံပညာရှင်သူတို့ရဲ့တည်းသောပုံမှန်မဟုတ်လေ့လာမှုတစ်ခု debunked မူကြောင်းကိုတောင်းဆိုမယ်လို့အဘယျသို့တရားဝင် လေ့လာမှုကောင်းစွာထူထောင်လယ်ပြင်?
၏အဖြစ်မှန်မှာတော့တွေ့ရှိချက် Prause et al ။ 2015 နှင့်အတူဿုံ align Kühn & Gallinat ကို (2014), အရာထက်ပိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကို vanilla porn ၏ရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်လျော့နည်းဦးနှောက်ကို Activation ဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Prause et al။ တွေ့ရှိချက်များကိုလည်းနှင့်အတူ align BANCA et al ။ 2015 သောဤစာရင်းထဲတွင် #13 ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, အခြား EEG လေ့လာမှု အမြိုးသမီးမြားတှငျပိုမို porn အသုံးပြုမှုကို porn မှ ဦး နှောက် activation နှင့်ဆက်နွယ်သောတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ EEG နိမ့်ဖတ်ခြင်းကဘာသာရပ်များသည်ရုပ်ပုံများကိုအာရုံစိုက်မှုနည်းသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည် vanilla porn ၏ငြိမ်သက်သောပုံရိပ်များကိုအထင်မသေးပါ။ သူတို့က (လေ့သို့မဟုတ် desensitized) ပျင်းခဲ့ကြသည်။ ဒီကိုကြည့်ပါ ကျယ်ပြန့် YBOP ဝေဖန်မှု။ ခုနစျပါး peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများဒီလေ့လာမှုအမှန်တကယ်မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများကို (စွဲလမ်းနှင့်ကိုက်ညီ) တွင် desensitization / လေ့တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသဘောတူ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
16) Hypersexual Disorder နှင့်အတူအမျိုးသားများအတွက် HPA ဝင်ရိုးတန်း Dysregulation (Chatzittofis, 2015)
[အလုပ်မဖြစ်သောစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု] - အမျိုးသားလိင်စွဲလမ်းသူ ၆၇ ဦး နှင့်အသက်အရွယ်နှင့်လိုက်ဖက်သောထိန်းချုပ်မှု ၃၉ ခုဖြင့်လေ့လာမှုတစ်ခု။ Hypothalamus-Pituitary-Adrenal (HPA) ဝင်ရိုးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုတွင်အဓိကကစားသမားဖြစ်သည်။ စွဲ ဦးနှောက်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုဆားကစ်ပြောင်းလဲ အလုပ်မဖြစ်တဲ့ HPA ဝင်ရိုးမှဦးဆောင်။ လိင်စွဲ (hypersexuals) ပေါ်မှာဤလေ့လာမှုပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းနှင့်အတူတွေ့ရှိချက် mirror ကြောင်းပြောင်းလဲစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထံမှကောက်နှုတ်ချက်:
အဆိုပါလေ့လာမှု hypersexual ရောဂါနှင့် 67 ကျန်းမာလိုက်ဖက်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ 39 ယောက်ျားပါဝင်ပတ်သက်။ သင်တန်းသားများကိုဂရုတစိုက် hypersexual ရောဂါနှင့်စိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာနှင့်အတူမည်သည့် Co-ရောဂါများအတွက်ရောဂါခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါသုတေသီများ၎င်းတို့၏ဇီဝကမ္မစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုတားစီးဖို့စမ်းသပ်မှုမပြုလုပ်မီညနေပိုင်းတွင်ပေါ်သူတို့ကို dexamethasone တစ်ဦးအနိမ့်ထိုးအပ်ပေးတော်မူ၏, အဲဒီနောက်နံနက်ယံ၌စိတ်ဖိစီးမှုဟာသူတို့ရဲ့အဆင့်ဆင့်တိုင်းတာ cortisol နှင့် ACTH hormones ။ သူတို့ဟာ hypersexual ရောဂါလူနာတောင်မှ Co-နေကြလို့ပဲစိတ်ကျရောဂါနှင့်ကလေးဘဝကိုစိတ်ဒဏ်ရာအဘို့ကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ကျန်ရစ်တဲ့ခြားနားချက်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုထက်ထိုကဲ့သို့သောဟော်မုန်းအဆင့်မြင့်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
"ထစ်အငေါ့စိတ်ဖိစီးမှုစည်းမျဉ်းယခင်ကစိတ်ဓာတ်နှင့်သတ်သေလူနာအဖြစ်ဥစ္စာချိုးဖောက်လေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ်," ပါမောက္ခ Jokinen ကပြောပါတယ်။ "မကြာသေးမီနှစ်ထဲမှာ, အာရုံစူးစိုက်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာဟာသူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်မှာကဤစနစ်များကိုထိန်းချုပ်သောမျိုးဗီဇကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ပုံကိုတစ်နည်းအတွက်ဒါခေါ်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုယန္တရားကနေတဆင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များတစ် dysregulation ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်မလားအပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ " ဟုအဆိုပါအရ သုတေသီများ, ရလဒ်အလွဲသုံးစားမှုအခြားအမျိုးအစားတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အတူတူ neurobiological system ကို hypersexual ရောဂါနှင့်အတူလူမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
17) Prefrontal ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်း: neuropsychological နှင့် neuroimaging တွေ့ရှိချက်တစ်ခုသီအိုရီမော်ဒယ်နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ် (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al။ , 2015)
[အလုပ်မဖြစ်သော prefrontal circuit များ / ပိုမိုဆင်းရဲသောအလုပ်အမှုဆောင် function နှင့် sensitization] - ကောက်နုတ်ချက် -
18) ဘာစွဲအတွက်သွယ်ဝိုက်အသင်းအဖွဲ့များ: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်အတူတစ်သွယ်ဝိုက်အစည်းအရုံးစမ်းသပ်ခြင်း၏ adapter (Snagkowski et al။ , 2015)
[သာ။ ကြီးသောတပ်မက်ခြင်း / sensitization] - ကောက်နုတ်ချက်:
မကြာသေးမီကလေ့လာမှုများကဆိုက်ဘာအဆက်ပြတ်မှုနှင့်ပစ္စည်းမှီခိုမှုအကြားတူညီမှုကိုပြသပြီး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုမှုအရသွယ်ဝိုက်သောအသင်းအဖွဲ့များသည်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ to မှပါ ၀ င်သည်။ ဤစမ်းသပ်လေ့လာမှုတွင်လိင်ကွဲလိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသား ၁၂၈ ဦး သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ပြုပြင်ထားသောသွယ်ဝိုက်အသင်းအဖွဲ့စစ်ဆေးမှု (IAT; Greenwald, McGhee, & Schwartz, 128) ကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ပြproblemနာရှိသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၊ လိင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုအာရုံပြုခြင်း၊
ရလဒ်များအရအပြာအပြာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသင်းအဖွဲ့များအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်စိတ်ခံစားမှုများနှင့်ဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုစွဲလမ်းမှု၊ ပြproblemနာရှိသည့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ၊ ထို့အပြင်တစ် ဦး အလယ်အလတ်ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမြင့်မားပုဂ္ဂလဒိive္တဏှာအစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့်အပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုနှင့်အတူအပြာရုပ်ပုံ၏အပြုသဘောသွယ်ဝိုက်အသင်းအဖွဲ့များပြသခဲ့သည်တစ် ဦး ချင်းစီ, အထူးသဖြင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးစွဲဆီသို့ ဦး တည်တော်မှာကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ တွေ့ရှိချက်များအရအပြာရုပ်ပုံများနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောသွယ်ဝိုက်သောပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးများသည်ဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုစွဲလမ်းမှုကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းတွင်အလားအလာရှိသောအခန်းကဏ္ role မှပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်လက်ရှိလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုသုတေသနအနေဖြင့်တွေ့ရှိချက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ကြပြီး cybersex စွဲနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုသို့မဟုတ်အခြားအပြုအမူစွဲအကြားနှိုင်းယှဉ်အလေးပေး။
19) ပုံမှန်ဘာအသုံးပြုသူ့ Analog နမူနာကနေရလဒ်တွေကို (ဘာစွဲ၏ရောဂါလက္ခဏာများနှစ်ဦးစလုံးချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်ရှောင်ရှားညစ်ညမ်းလှုံ့ဆော်မှုချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်et al Snagkowski ။, 2015)
20) ညစ်ညမ်းအတူ flyer တဲ့? တစ်ဦး multitasking ကိုအခြေအနေမှာဘာတွေကိုသုံးရင်သို့မဟုတ်လစ်လျူရှုကျဘာစွဲလက္ခဏာတွေမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ် (Schiebener et al ။, 2015)
[ပိုမိုပြင်းထန်သောစိတ် / သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်ဆင်းရဲသောအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှု] - ကောက်နုတ်ချက်:
21) ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်နှောင့်နှေးဝ (လက်ရှိပျော်ရွှင်မှုအဘို့အနောက်ပိုင်းတွင်ဆုလာဘ်များအရောင်းအဝယ်ဖြစ်Negash et al ။, 2015)
[ဆင်းရဲတဲ့အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှု - အကြောင်းပြချက်စမ်းသပ်မှု] - ကောက်နုတ်ချက်များ။
လေ့လာမှု ၁ - သင်တန်းသားများသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းမေးခွန်းလွှာနှင့်အချိန် ၁ တွင်နောက်ဆုတ်ခြင်းလျှော့ချခြင်းလုပ်ငန်းပြီးဆုံးပြီးနောက်လေးပတ်အကြာတွင်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောကန ဦး ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံသောသင်တန်းသားများသည် Time 1 တွင်ပိုမိုနှေးကွေးသောလျှော့နှုန်းကိုပြသခဲ့သည်၊ လေ့လာမှု ၂ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းမှရှောင်ကြဉ်သောသူများသည်မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောအစာကိုရှောင်ကြဉ်သောသင်တန်းသားများထက်နှေးနှေးလျှော့စျေးလျှော့ချကြောင်းပြသခဲ့သည်။
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု compulsive သို့မဟုတ်စွဲလမ်းမဟုတ်ပါလျှင်ပင်အခြားအကိုသဘာဝဆုလာဘ်ပြုထက်ကွဲပြားခြားနားဝနှောင့်နှေးစေတယ်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချသောဆုဖြစ်၏။ ဒါဟာသုတေသနအကျိုးသက်ရောက်မှုယာယီ arousal ကျော်လွန်တတ်ကြောင်းဆန္ဒပြ, အရေးပါသောအလှူငွေစေသည်။
ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုကိုချက်ချင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန္ဒပြည့်ပေးစေခြင်းငှါပေမယ့်လူတစ်ဦး၏အသက်တာ၏တစ်ခြား domains လုပ်ဆောင်ရမှာတွေနှင့်ထိခိုက်စေသည်ဟုသက်ရောက်မှုတွေ, အထူးသဖြင့်ဆက်ဆံရေးရှိနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါတွေ့ရှိချက်သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းကွဲပြားခြားနားသည်အခြားသဘာဝကဆုလာဘ်ထက်ဝနှောင့်နှေးစေတယ်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချသောဆုဖြစ်၏ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဒါဟာထူးခြားတဲ့ဆုလာဘ်အတွက်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှု, Impulse နှင့်စွဲလေ့လာမှုများအဖြစ်ညစ်ညမ်းဆက်ဆံဖို့နှင့်တစ်ဦးချင်းအဖြစ် relational ကုသမှုအညီဒီလျှောက်ထားရန်ထို့ကြောင့်အရေးကြီးပါသည်။
22) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်အလုပ်မဖြစ်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ငိုကြွေးနေသောကောင်ကလေးအထီးအတွက်ဘာစွဲ (ဆုံးဖြတ်ပါLaier et al ။, 2015)
မကြာသေးမီကတွေ့ရှိချက်များအရ CyberSex စွဲလမ်းမှု (CA) ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်လိင်စိတ်လှုပ်ရှားနိုင်မှုအညွှန်းကိန်းများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် CA လက္ခဏာများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည်။ ဒီလေ့လာမှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီစေ့စပ်ဖြန်ဖြေမှုကိုလိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများအတွက်စမ်းသပ်ရန်ဖြစ်သည်။ မေးခွန်းများသည် CA ၏လက္ခဏာများ၊ လိင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုအကင်းပါးပါး၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်း၊ ပြproblemနာရှိသည့်လိင်အပြုအမူ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုစစ်မှန်သောဘဝနှင့်အွန်လိုင်းတွင်အကဲဖြတ်သည်။ ထို့အပြင်သင်တန်းသားများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှု။ ဗီဒီယိုတင်ဆက်မှုမတိုင်မီနှင့်အပြီးတွင်သူတို့၏လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
ရလဒ်များသည် CA လက္ခဏာများနှင့်လိင်မှုနှိုးဆွမှုနှင့်လိင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုညွှန်ကိန်းများ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများအကြားပြင်းထန်သောဆက်နွယ်မှုများပြသခဲ့သည်။ , CA အော့ဖ်လိုင်းလိင်အပြုအမူများနှင့်အပတ်စဉ်ဆိုက်ဘာအသုံးပြုမှုအချိန်နှင့်ဆက်စပ်မခံခဲ့ရပါဘူး။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအားဖြင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလိင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် CA. အကြားဆက်ဆံရေးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကမကထပြုခဲ့ ရလဒ်များသည်ယခင်လေ့လာမှုများတွင်လိင်ကွဲယောက်ျားများနှင့်မိန်းမများအတွက်အစီရင်ခံတင်ပြသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ CA ၏သီအိုရီအရယူဆချက်များ၏နောက်ခံကိုဆန့်ကျင်။ ဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်အပြုသဘောဆောင်ခြင်းနှင့်အနှုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ခြင်း၏အခန်းကဏ္highlightကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။
23) Hypersexual Disorder ၏ Pathophysiology အတွက် Neuroinflammation ၏အခန်းက္ပ (Jokinen et al။ , 2016)
[အလုပ်မဖြစ်သောစိတ်ဖိစီးမှုတုန့်ပြန်မှုနှင့်အာရုံကြောရောင်ရမ်းခြင်း] - ဤလေ့လာမှုကကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်စွဲသူများတွင် Tumor Necrosis Factor (TNF) ပျံ့နှံ့နှုန်းမြင့်မားကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲသူများနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲသည့်တိရိစ္ဆာန်များ (အရက်၊ ဘိန်းဖြူ၊ မက်) တွင် TNF (ရောင်ရမ်းခြင်းအမှတ်အသား) မြင့်မားသောအဆင့်များကိုတွေ့ရှိရသည်။ hypersexuality ကိုတိုင်းတာသည့် TNF အဆင့်နှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အကြားပြင်းထန်သောဆက်နွယ်မှုများရှိသည်။
24) compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: Prefrontal ပြီးတော့ Limbic Volume ကိုများနှင့်ဆက်သွယ်မှုသည် (Schmidt က et al ။, 2016)
[အလုပ်မဖြစ်သော prefrontal circuit များနှင့် sensitization] - ဤသည် fMRI လေ့လာမှုဖြစ်သည်။ ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် CSB ဘာသာရပ်များ (ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများ) သည်ဘယ်ဘက် amygdala ပမာဏတိုးပွားလာခြင်းနှင့် amygdala နှင့် dorsolateral prefrontal cortex DLPFC အကြားအလုပ်လုပ်ဆက်သွယ်မှုကိုလျှော့ချခဲ့သည်။ အဆိုပါ amygdala နှင့် prefrontal cortex အကြားအလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှုလျှော့ချပစ္စည်းဥစ္စာစွဲနှင့် aligns ။ ပိုမိုထိရောက်သောဆက်သွယ်မှုသည်စွဲလမ်းစေသောအမူအကျင့်တွင်အသုံးပြုရန်အသုံးပြုသူ၏လှုံ့ဆော်မှုအပေါ် prefrontal cortex ၏ထိန်းချုပ်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်ဟုယူဆရသည်
ဒီလေ့လာမှုကမူးယစ်ဆေးဝါးအဆိပ်သင့်မှုဟာမီးခိုးရောင်နည်းစေပြီးမူးယစ်ဆေးစွဲသူများအတွက် amygdala ပမာဏကိုလျှော့ချနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြသည်။ အမိဂဒလသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်း၊ အထူးသဖြင့်လိင်ဆိုင်ရာကန ဦး ထိတွေ့မှုတွင်စဉ်ဆက်မပြတ်တက်ကြွစွာလှုပ်ရှားသည်။ အမြဲတမ်းလိင်မှုကိစ္စအသစ်အဆန်းရှာဖွေခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းတို့သည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများအတွက်မဂဒလကိုထူးခြားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်နှစ်ပေါင်းများစွာစွဲစွဲလန်းလန်းဆိုးကျိုးများနှင့်ဆိုးဝါးသောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများမှာအလွန်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်သည်hronic လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှုတိုးလာ amygdala အသံအတိုးအကျယ်မှဆက်စပ်ဖြစ်ပါသည်။ လေ့လာမှု #16 အထက် "လိင်စွဲ" တစ်ခု overactive စိတ်ဖိစီးမှုသည့်စနစ်ရှိသည်ကိုတွေ့။ porn / လိင်စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်သည့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု, လိင်ထူးခြားသောစေအချက်များနှင့်အတူ သာ. ကြီးမြတ် amygdala အသံအတိုးအကျယ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်မလား? တစ်ဦးကောက်နုတ်ချက်:
ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိတွေ့ရှိချက်များသည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့် prefrontal အပေါ်မှအောက်မှထိန်းချုပ်သည့်ထိန်းချုပ်မှုကွန်ယက်များ၏နိမ့်ကျသောပြည်နယ်ဆက်သွယ်မှုတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေသည့်ဒေသတစ်ခု၏မြင့်မားသောပမာဏကိုမီးမောင်းထိုးပြနေသည် ထိုကဲ့သို့သောကွန်ယက်များပြတ်တောက်ခြင်းကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထူးချွန်သောဆုလာဘ်သို့မဟုတ်အဓိကမက်လုံးများပေးခြင်းအပေါ်ပိုမိုကောင်းမွန်သောတုန့်ပြန်မှုဆီသို့ပုံမှန်မဟုတ်သောအပြုအမူပုံစံများကိုရှင်းပြနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ volumetric တွေ့ရှိချက်များသည် SUD ရှိသူများနှင့်ကွဲပြားသော်လည်းဤတွေ့ရှိချက်များသည်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးထိတွေ့မှု၏ neurotoxic သက်ရောက်မှုတစ်ခု function ကိုအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားမှုရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။ ထွက်ပေါ်လာသောအထောက်အထားများအရစွဲလမ်းမှုဖြစ်စဉ်နှင့်ထပ်တူကျမှုသည်အထူးသဖြင့်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုသီအိုရီများကိုထောက်ပံ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိကအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ပိုမိုနှစ်သက်သောလိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအချက်များနှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်ဤ salience ကွန်ယက်တွင်လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ [Brand et al ။ , 2016; seok နှင့် Sohn, 2015; Voon et al ။ , 2014] တိုးမြှင်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု [Mechelmans et al နှင့်အတူ။ , 2014] နှင့်အထွေထွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ [အမှတ်တံဆိပ် et al လိင် cue မှတိကျတဲ့သော်လည်းမအလိုရှိကြသည်။ , 2016; Voon et al ။ , 2014] ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုမှ Enhanced အာရုံကိုနောက်ထပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue အေးစက်နှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု [BANCA et al အကြားဆက်ဆံရေးကိုအတည်ပြုအရှင်လိင်အေးစက်တွေကိုအဘို့အ preference ကိုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ , 2016].
လိင်မှုဆိုင်ရာအခြေအနေများနှင့်သက်ဆိုင်သောတိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်မှု၏ဤတွေ့ရှိချက်များသည်ရလဒ် (သို့မဟုတ်ခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှု) ၏ကွဲပြားမှုနှင့်ကွဲပြားသည်၊ သည်းခံခြင်း၏သဘောတရားနှင့်အညီတိုးမြှင့်လေ့ရှိသောလေ့ကျင့်ခန်းသည် ၀ တ္ထုအသစ်၏လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကိုပိုမိုနှစ်သက်စေသည် [Banca et al ။ , 2016] ။ အတူတူကဤတွေ့ရှိချက်ဖြစ်နိုင်သောကုထုံးအမှတ်အသားများ၏ရောဂါနှင့်မှတ်ပုံတင်တစ်ခု သာ. ကြီးမြတ်နားလည်မှုဆီသို့ဦးဆောင် CSB ၏အခြေခံ neurobiology elucidate ကိုကူညီပေးပါတယ်။
25) Ventral Striatum Activity ကိုအကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါပိုမိုနှစ်သက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ (အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ရောဂါလက္ခဏာများဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al။ , 2016)
[သာလွန်သော ceut reactivity / sensitization] - ဂျာမန် fMRI လေ့လာမှု။ ရှာဖွေခြင်းနံပါတ် (၁) ။ ။ နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအတွက်ဆုပေးစင်တာလှုပ်ရှားမှု (ventral striatum) သည်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက် # ၂။ Ventral striatum ဓာတ်ပြုမှုသည်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုရမှတ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ တွေ့ရှိချက်နှစ်ခုလုံးက sensitization ကိုပြသပြီး the နဲ့ align စွဲမော်ဒယ်။ အဆိုပါစာရေးဆရာက "အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲ၏ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောအခြေခံသည်အခြားစှဲဖို့နှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ " အဲဒီဖော်ပြတစ်ခုကောက်နုတ်ချက်:
26) ပြောင်းလဲအစာစားချင်စိတ်အခြေအနေများနှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောဆက်သွယ်မှု (Klucken et al ။, 2016)
[သာ။ ကြီးသော cue ဓါတ်ပြုမှု / sensitization နှင့်အလုပ်မဖြစ် prefrontal ဆားကစ်] - ဒီဂျာမန် fMRI လေ့လာမှုကနေအဓိကတွေ့ရှိချက်နှစ်ခုကိုပုံတူကူး Voon et al ။ , 2014 နှင့် Kuhn & Gallinat 2014။ အဓိကတွေ့ရှိချက်များ - CSB အုပ်စုတွင်အစာစားချင်စိတ်အခြေအနေနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုတို့၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုများကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သုတေသီများအဆိုအရပထမပြောင်းလဲမှု - ပိုမိုမြင့်မားသောအမဂဒလာကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုသည် - လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် (ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ဆထားသည့်ယခင်ကြားနေစနစ်များအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော“ ဝါယာကြိုး”) ကိုထင်ဟပ်နိုင်သည်။
ဒုတိယအပြောင်းအလဲ - ventral striatum နှင့် prefrontal cortex အကြားဆက်သွယ်မှုလျော့နည်းလာခြင်း - Impulses သတင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်စွမ်းရည်ချို့တဲ့ခြင်းအတွက်အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သုတေသီများက "ဒီ [ပြောင်းလဲမှု] သည်စွဲရောဂါနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုအာရုံကြောဆက်စပ်မှုများနှင့်လှုံ့ဆော်ထိန်းချုပ်မှုလိုငွေပြမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်အခြားလေ့လာမှုများနှင့်အညီဖြစ်သည်" ဟုသုတေသီများကပြောကြားခဲ့သည် တွေကိုပိုမို amygdalar activation ၏တွေ့ရှိချက်များ (ာင်း) နှင့်အကျိုးကိုစင်တာနှင့် prefrontal cortex (အကြားဆက်သွယ်မှုလျော့နည်းသွားhypofrontality) ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲတွင်တွေ့မြင်အဓိကဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများနှစ်ခုရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်3compulsive porn အသုံးပြုသူ 20 ခံစားခဲ့ရတစ်ခုကောက်နုတ်ချက် "orgasm-စိုက်ထူရောဂါ။ ":
ယေဘုယျခုနှစ်, လေ့လာတွေ့ရှိတိုးချဲ့ amygdala လှုပ်ရှားမှုနှင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်းလျော့နည်းသွား ventral striatal-PFC နားချင်းဆက်မှီ CSB ၏ etiology နှင့်ကုသမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးထင်မြင်ချက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ CSB နှင့်အတူဘာသာရပ်များတရားဝင်ကြားနေတွေကိုနှင့်လိင်သက်ဆိုင်ရာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုများအကြားအသင်းအဖွဲ့များထူထောင်ဖို့ပိုကျရောက်နေတဲ့သလိုပဲ။ ထို့ကြောင့်ဤဘာသာရပ်များချဉ်းကပ်အပြုအမူထုတ်ယူကြောင်းတွေကိုကြုံတွေ့ရဖို့ပိုများပါတယ်။ ဒီ CSB စေပါတယ်သို့မဟုတ် CSB ၏ရလဒ်အနာဂတ်သုတေသနများကဖြေကြားရမည်ဖြစ်သည်ဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိ။ ထို့အပြင်လျော့နည်းသွား ventral striatal-prefrontal နားချင်းဆက်မှီတွင်ထင်ဟပ်နေသောချို့ယွင်းစည်းမျဉ်းဖြစ်စဉ်များ, နောက်ထပ်ပြဿနာအပြုအမူများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုထောကျပံ့ပေလိမ့်မည်။
27) အဆိုပါရောဂါဗေဒဆေးဝါးတလွဲအသုံးပြုခြင်းနှင့် Non-မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်များ (တစ်ဝှမ်း compulsiveBANCA et al ။, 2016)
[ပိုမိုကောင်းမွန်သောတုံ့ပြန်မှု / သိသာထင်ရှားမှု၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအခြေအနေများဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများ] - ဤကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ် fMRI လေ့လာမှုသည်အရက်၊ မူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲသူများနှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများ (CSB) တွင်မဖြစ်မနေလိုက်နာရမည့်အချက်များကိုနှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ ကောက်နုတ်ချက်များ
သည်အခြားမမှန်မတူဘဲ, HV နှိုင်းယှဉ် CSB မသက်ဆိုင်ဘဲမူလရလဒ်ကို၏အကျိုးကိုအခြေအနေကြီးမြတ်သောဇွဲနှင့်အတူရလဒ်များဆုချမှပိုမြန်ဝယ်ယူပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါ CSB ဘာသာရပ်များ set ကိုပြောင်းလဲသို့မဟုတ်မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်လေ့လာသင်ယူမှုအတွက်မဆိုတိကျတဲ့ချို့ယွင်းမပြခဲ့ပါဘူး။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ခြုံငုံဆုလာဘ်မှပိုကောင်း sensitivity ကိုအကြံပြုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ငွေကြေးဆိုင်ရာဖြစ်စေရလဒ်များမှအေးစက်လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်မြှင့်တင်ရန် preference ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်တွေ့ရှိချက်များ, (အတူဆုံBANCA et al ။ , 2016) ။ အဓိကဆုလာဘ်သုံးပြီးနောက်ထပ်လေ့လာမှုများညွှန်ပြနေကြသည်။
28) ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်ဖွဲ့စည်းသင်ယူဘို့ပုဂ္ဂလဒိဋ္တဏှာ (ပုံမှန်ဘာအသုံးပြုသူများ၏နမူနာထဲမှာဘာစွဲဆီသို့သဘောထားတွေကိုခန့်မှန်းပြီးSnagkowski et al ။, 2016)
[သာလွန်သောတုံ့ပြန်မှု / တုန့်ပြန်မှု၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအခြေအနေများတုံ့ပြန်မှုများ] - ဤထူးခြားသောလေ့လာမှုသည်ယခင်ကကြားနေပုံစံများကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံ၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည်။ ကောက်နုတ်ချက်များ
ဘာစွဲ၏အဖြေရှာတဲ့စံနှင့် ပတ်သက်. မျှသဘောတူညီမှုရှိပါသည်။ တချို့ကချဉ်းကပ်မှုဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုအရေးပါသောယန္တရားဖြစ်သောများအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုမှတူညီ postulate ။ ဤလေ့လာမှု၌, 86 လိင်ကွဲအထီးကျဘာစွဲအတွက်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်အတူပြုပြင်ထားသောတူရိယာဆိုင်ရာလွှဲပြောင်း Task ကိုမှဟာ Standard Pavlovian ပြီးစီးခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ကြောင့်ကျဘာစွဲဆီသို့ဦးတည်ညစ်ညမ်းပုံနဲ့သဘောထားတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ပုဂ္ဂလဒိဋ္တဏှာအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ရလဒ်များဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုများကတည်းဖြတ်, ဘာစွဲဆီသို့ဦးတည်လိုတဲ့သဘောထားကိုအပေါ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္တဏှာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပြသခဲ့သည်။
ယေဘုယျအားဤတွေ့ရှိချက်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုခြင်းနှင့်ဆိုက်ဘာဆက်နွယ်မှုအကြားတူညီဘို့နောက်ထပ်ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားပေးစဉ်ယေဘုယျအားဤတွေ့ရှိချက်ဆိုက်ဘာဆက်နွယ်မှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဆက်စပ်သင်ယူမှု၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္towardsကိုညွှန်ပြ။ အချုပ်အားဖြင့်လက်ရှိလေ့လာမှု၏ရလဒ်များအရတွဲဖက်လေ့လာသင်ယူခြင်းသည်ဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုစွဲလမ်းမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နိုင်သည်ဟုအကြံပြုထားသည်။ ပုဂ္ဂလိကတပ်မက်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုဆိုင်ရာလေ့လာသင်ယူမှုများ၏လွှမ်းမိုးမှုများကိုပြသခဲ့ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များအရဆိုက်ဘာဆက်နွယ်မှုနှင့်ပစ္စည်းမှီခိုမှုတို့၏တူညီမှုကိုထပ်မံသက်သေထူသည်။
29) အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ပြီးနောက်စိတ်ဓါတ်များအပြောင်းအလဲများကို (အင်တာနက်ညစ်ညမ်း-ကြည့်ရောဂါ၏လက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်နေပါသည်Laier & အမှတ်တံဆိပ်,2016)
[သာ။ ကြီးမြတ်စွဲ / sensitization, အကြိုက်လျော့နည်း] - ကောက်နှုတ်ချက်:
လေ့လာမှု၏အဓိကရလဒ်များမှာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရောဂါ (IPD) နှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ကောင်းမွန်သော၊ နိုးကြား။ အေးဆေးတည်ငြိမ်ခြင်းနှင့်နေ့စဉ်ဘ ၀ ၌စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုရှာဖွေရန်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှောင်ရှားခြင်း။ ထို့အပြင် IPD နှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားများသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းမပြုမီနှင့်ပြီးနောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်သော၊
အင်တာနက် - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကြောင့် IPD နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုရှာဖွေလိုသည့်သဘောထားများအကြားဆက်သွယ်မှုကိုအတွေ့အကြုံရှိအော်ဂဇင်၏ကျေနပ်မှုကိုအကဲဖြတ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်လေ့လာမှု၏ရလဒ်များအနေဖြင့် IPD သည်လိင်ဆန္ဒပြည့်မှုကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဆိုးရွားသည့်စိတ်ခံစားမှုများကိုရှောင်ရှားရန်သို့မဟုတ်ကိုင်တွယ်ရန်တွန်းအားပေးခြင်းအပြင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများစားသုံးမှုနောက်တွင်စိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲခြင်းသည် IPD နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟူသောယူဆချက်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟူသောယူဆချက်နှင့်ကိုက်ညီသည် (Cooper က et al ။ , 1999 နှင့် Laier နှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, 2014).
30) ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: လက်တွေ့အပြုအမူများနှင့် neurocognitive variable တွေကို (2016) ကိုဖြတ်ပြီးအသင်း
[ဆင်းရဲသောအမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာ] - ပြProbleနာများဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ (PSB) ရှိသူများသည်အာရုံကြော - သိမြင်မှုဆိုင်ရာချို့တဲ့မှုကိုပြသခဲ့သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များက ပို၍ ဆင်းရဲသည်ကိုပြသည် အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်ကို တစ်ဦးဖြစ်သော (hypofrontality) မူးယစ်ဆေးစွဲများတွင်ဖြစ်ပေါ် key ကိုဦးနှောက်အင်္ဂါရပ်။ အနည်းငယ်ကောက်နှုတ်ချက်:
ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထံမှတစ်ခုမှာထင်ရှားတဲ့ရလဒ် PSB အသက်တာ၏အရည်အသွေးကိုလျော့ကျ, နိမ့် Self-လေးစားမှုအပါအဝင် deleterious လက်တွေ့အချက်များ၏နံပါတ်နှင့်အတူသိသာအသင်းအဖွဲ့များကိုပြသနေသည်ဟု BMI တိုးမြှင်နှင့်အတော်ကြာမမှန်များအတွက်ပိုမိုမြင့်မား comorbidity နှုန်းထားများဖြစ်ပါတယ် ...
... က PSB အုပ်စုတွင်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည့်နေရာလက်တွေ့ features တွေအမှန်တကယ် PSB နှင့်အခြားလက်တွေ့ features တွေနှစ်ဦးစလုံးမှမြင့်တက်ပေးသောတစ်ကောလိပ်, တက္ကသိုလ် variable ကို၏ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီအခန်းကဏ္ဍဖြည့်တစ်ဦးကအလားအလာအချက်အတွက် PSB အုပ်စုတွင်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည့်နေရာ neurocognitive လိုငွေပြမှု, အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်, Impulse / ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းအထူးသဖြင့်သူတို့အားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီစရိုက်လက္ခဏာတွေကနေ, ကအထူးသဖြင့်သိမြင်လိုငွေပြမှုငှါ, PSB အတွက်ထင်ရှားပြဿနာတွေနဲ့ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ခံစားမှု dysregulation အဖြစ်နောက်ထပ်လက်တွေ့ features တွေ, ခြေရာကောက်ရန်ဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်သည် ...
ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည့်နေရာသိမြင်မှုပြဿနာများကိုအမှန်တကယ် PSB ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များမှာလျှင်ဤမှတ်သားလောက်လက်တွေ့သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ။
31) Hypersexual Disorder နှင့်အတူအမျိုးသားများအတွက် HPA ဝင်ရိုးတန်း Related Gene ၏ methylation (Jokinen et al။ , 2017)
[အလုပ်မဖြစ်သောစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု၊ ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအပြောင်းအလဲများ] - ဤသည်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သည် အထက် #16 အရာလိင်စွဲအလုပ်မဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များရှိသည်တွေ့ရှိခဲ့ - စွဲကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အဓိက neuro-endocrine ပြောင်းလဲမှု။ လက်ရှိလေ့လာမှုလူ့စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုမှဗဟိုမျိုးဗီဇအပေါ်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုပြောင်းလဲမှုများကိုတွေ့ရှိရနှင့်အနီးကပ်စွဲနှင့်ဆက်နွယ်။ ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူ ယင်း DNA ကို sequence ကိုပြောင်းလဲမဟုတ်ပါဘူး (က mutation နှင့်အတူဖြစ်ပျက်ကဲ့သို့) ။ အဲဒီအစား, မျိုးဗီဇ tagged ဖြစ်ပါတယ်နှင့်၎င်း၏စကားရပ်ကိုတက်လှည့်သို့မဟုတ်ဆင်း (ဖြစ်ပါတယ်ဗွီဒီယိုအတိုပီဂနြရှင်းပြ) ။ ဒီလေ့လာမှုမှာအစီရင်ခံအဆိုပါဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုပြောင်းလဲမှုများကိုပြောင်းလဲ CRF ဗီဇလှုပ်ရှားမှုခဲ့သည်။ CRF တစ်ဦး neurotransmitter နှင့်ဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ် ကြောင်းစွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုမောင်း ထိုကဲ့သို့သောမတရားသောနှင့်နေသည်အဖြစ် အဓိကကစားသမား နှင့် ဆက်စပ်. ကြုံတွေ့ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေအတော်များများအတွက် ပစ္စည်းဥစ္စာ နှင့် အမူအကျင့်စှဲအပါအဝင် porn စွဲ.
32) လိင် Active ကိုတစ်ဦးချင်းတစ်ဦးအလိုက် (အတွင်းလိင်-Related စကားမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုတို့အကြားဆက်ဆံရေး ExploringAlbery et al ။, 2017)
[သာ။ ကြီးမြတ်သော cue တုံ့ပြန်မှု / sensitization, desensitization] - ဒီလေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်များကိုပုံတူ ဒီ 2014 ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကလေ့လာမှုကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုမှ porn စွဲ၏အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အရာ။ ဤတွင်သစ်ကိုဖွင့်အဘယျသို့င်: အဆိုပါလေ့လာမှု 1 နှင့်အတူ "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏အနှစ်" ဆက်နွယ်နေကြောင်း) ကလိင်စွဲရမှတ်များနှင့်လည်း 2) ကိုအာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်၏ရလဒ်များကို။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲအပေါ်မြင့်မားသောသွင်းယူသူတွေထဲမှာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနည်းပါးလာနှစ်ပေါင်း ( သာ. ကွီးမွတျအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြသည်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု၏ရှင်းပြချက်).
ထို့ကြောင့်ပိုမိုမြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုရမှတ်များ + နှစ်နည်းပါးသည့်လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ = စွဲစွဲလမ်းမှုပိုမိုကြီးထွားလာသောလက္ခဏာများ (ပိုမိုအာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုသို့မဟုတ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု) ။ သို့သော်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုသည်မလိုမုန်းထားသူများ၌သိသိသာသာကျဆင်းသွားပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာလိင်အတွေ့ကြုံအများဆုံးတွင်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ စာရေးသူများကဤရလဒ်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာ“ အတင်းအကျပ်လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်း” သည်သာမန်အားဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း (သို့) အပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှု (desensitization) ၏အထွေထွေထုံသွားခြင်းကိုဖြစ်စေသည်ဟုဖော်ပြသည်။ နိဂုံးချုပ်မှကောက်နုတ်ချက်။
ဤရလဒ်များအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောရှင်းပြချက်တစ်ခုမှာလိင်ဆိုင်ရာအပြုသဘောဆောင်သည့်လူတစ် ဦး သည် ပို၍ အနိုင်ကျင့်သောအပြုအမူတွင်ပါဝင်သောကြောင့်ဆက်စပ်သောနှိုးဆွမှုပုံစံ [36-38] နှင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတူညီသောနှိုးဆွမှုအဆင့်ကိုသဘောပေါက်ရန်လိုအပ်သည် ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်ပိုမိုအပြုသဘောဆောင်သည့်အပြုအမူများပြုလုပ်သည့်အခါအာရုံကြောလမ်းကြောင်းသည် ပို၍ ပုံမှန်ဖြစ်သောလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများကိုအာရုံမခံစားနိုင်တော့ဘဲတစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်လိုချင်သောနှိုးဆွမှုကိုပိုမိုသိရှိရန်ပိုမိုအစွန်းရောက်သောလှုံ့ဆော်မှုများသို့ပြောင်းလဲသွားသည်ဟုထပ်မံငြင်းခုံသည်။ ဤအချက်သည် 'ကျန်းမာသော' ယောက်ျားများသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတိကျသောလှုံ့ဆော်မှုများကိုခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်းပြသသည့်အလုပ်နှင့်အညီဖြစ်သည်။
ဤအချက်က ပိုမို၍ တွန်းအားဖြစ်စေသော၊ လိင်ဆိုင်ရာတက်ကြွသောပါဝင်သူများသည်လက်ရှိလေ့လာမှုတွင်အသုံးပြုသော“ ပုံမှန်” လိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောစကားလုံးများကို“ ထုံထိုင်းခြင်း” သို့မဟုတ် ပို၍ လျစ်လျူရှုလာခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောပြသမှုသည်အာရုံစူးစိုက်မှုလျော့နည်းသွားခြင်း၊ အဆိုပါလှုံ့ဆော်မှုပိုပြီးထိခိုက်သိမှတ်ခံစားမှုရောင်ပြန်ဟပ်လို့ပဲ။
33) မဖြစ်မီနှင့်တစ်ဦးခေါ်ဆောင်သွားဗီဒီယိုအကဲခတ်ပြီးနောက်လိင် compulsive နှင့် Non-လိင် compulsive အမျိုးသားများ၏အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံ (Messina et al။ , 2017)
[ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောအလုပ်အမှုဆောင်စွမ်းဆောင်ရည်၊ ပိုမိုပြင်းထန်သောစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများ] - ယောက်ျားများတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများပါ ၀ င်သည့်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ထိတွေ့ခြင်း၊ စွဲလမ်းမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များနှင့်ထိတွေ့သည့်အခါအလုပ်အမှုဆောင်ညံ့ဖျင်းသောအမှုဆောင်ခြင်းသည်ပစ္စည်းဥစ္စာမမှန်ခြင်း (နှစ်မျိုးလုံးကိုပြသည်) ပြောင်းလဲ prefrontal ဆားကစ် နှင့် ာင်း) ။ ကောက်နှုတ်ချက်:
34) ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံကိုစှဲဖြစ်နိုင်သလား? ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုရှာအမျိုးသားများအတွက်တစ်ခု fMRI လေ့လာမှု (Gola et al။ , 2017)
[ပိုမိုကောင်းမွန်သောတုံ့ပြန်မှု / sensitization ပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်း၊ အခြေအနေကောင်းသည့်တုံ့ပြန်မှုများ] - ယခင်ကကြားနေပုံစံများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများပုံဖော်ခြင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသောထူးခြားသည့် cue-reactivity paradigm နှင့်ပတ်သက်သော fMRI လေ့လာမှုတစ်ခု။ ကောက်နုတ်ချက်များ
(PPU) နှင့်ပြဿနာ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲယောက်ျားခေါ်ဆောင်သွားဓါတ်ပုံတွေကိုခန့်မှန်းတွေကိုမှဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုအတွက်, ဒါပေမယ့်မနှင့်အတူတသမတ်တည်းခေါ်ဆောင်သွားဓာတ်ပုံများကိုမိမိတို့ကိုယ်မှတုံ့ပြန်မှုအတွက်ကွဲပြား စှဲ၏မက်လုံးပေး salience သီအိုရီ။ ဤသည်ကဦးနှောက်ကို Activation (ပိုမိုမြင့်မား '' လို ') ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုရန်တိုးမြှင့်အပြုအမူလှုံ့ဆျောမှုဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့သည်။ ခေါ်ဆောင်သွားဓါတ်ပုံတွေကိုခန့်မှန်းတွေကိုအဘို့အ Ventral striatal reactivity ကို, ရက်သတ္တပတ်များနှင့်အပတ်စဉ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအရေအတွက်နှုန်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပမာဏ PPU ၏ပြင်းထန်မှုမှသိသိသာသာဆက်စပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များကဲ့သို့ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုခြင်းနှင့်လောင်းကစားဝိုင်းမမှန်အတွက်တွေကို anticipatory အပြောင်းအလဲနဲ့ဆက်စပ်သည့်အာရုံကြောနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာယန္တရားများ PPU ၏ဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာ features တွေလုပ်ဖို့အရေးကြီးဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် PPU တစ်ဦးအမူအကျင့်စွဲကိုယ်စားပြု PPU နှင့်အတူယောက်ျားကူညီပေးနေအတွက်လိုက်လျောညီထွေနှင့်အသုံးပြုခြင်းတို့အတွက်အမူအကျင့်များနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းမှုကိုရမ်းထည့်သွင်းစဉ်းစားပစ်မှတ်ထားအတွက်ကြားဝင်အထောက်အကူဖြစ်စေအကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
35) Emotion မသိနှင့် Non-သတိဆောင်ရွက်ချက်များ: သူတို့ဟာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူပြောင်းသလား? (Kunaharan et al ။, 2017)
[လေ့ကျင့်ခန်းသို့မဟုတ် desensitization] - erotica အပါအ ၀ င်အမျိုးမျိုးသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စေသောရုပ်ပုံများကိုညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများ၏တုန့်ပြန်မှု (EEG ဖတ်ခြင်းနှင့်စတင်ခြင်းတုန့်ပြန်မှု) ကိုလေ့လာပါ။ လေ့လာမှုအနိမ့်ကြိမ်နှုန်း porn အသုံးပြုသူများနှင့်ကြိမ်နှုန်းမြင့် porn အသုံးပြုသူများအကြားအများအပြားအာရုံကြောကွဲပြားမှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကောက်နုတ်ချက်များ
တွေ့ရှိချက်များကိုတိုးမြှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ Self-အစီရင်ခံစာအားဖြင့်မပြသခဲ့သည့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု-inducing လှုံ့ဆော်မှုဖို့ဦးနှောက်ရဲ့ Non-သတိတုံ့ပြန်မှုတခုတခုအပေါ်မှာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်ဖို့ပေါ်လာအကြံပြုအပ်ပါသည်။
4.1 ။ အကဲဆတ်သော Rating: စိတ်ဝင်စားစရာမြင့် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းအဖွဲ့အလတ်စားအသုံးပြုမှုအုပ်စုတစ်စုထက်ပိုမနှစ်မြို့ဖွယ်အဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်တွေသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ စာရေးသူ [ဤကြောင့်က Harper ကိုနှင့် Hodgins အားဖြင့်ပြသလျက်ရှိသည်အဖြစ်သူတို့များသောအားဖြင့်, ထွက်ရှာအံ့သောငှါစခွေငျးငှါနှိုးဆွမှုအဆင့်အတန်းပေးမ IAPS database ထဲတွင်ပါရှိသော "ခေါ်ဆောင်သွား" ပုံရိပ်တွေ၏အတော်လေး "ပျော့-Core" သဘာဝမှဖြစ်နိုင်သည်အကြံပြု58] ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုမကြာခဏကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်လူအများအပြားတို့သည်တူညီသောဇီဝကမ္မနှိုးဆွမှုအတိုင်းအတာကိုထိန်းသိမ်းရန်ပိုမိုပြင်းထန်သောအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုခြင်းသို့မကြာခဏဝင်ရောက်ကြသည်။
“ သာယာသော” စိတ်လှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားသည်အုပ်စုသုံးစုလုံး၏တန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက်သည်မြင့်မားသောအသုံးပြုမှုအုပ်စုနှင့်အခြားအုပ်စုများထက်ပျမ်းမျှအားဖြင့်အနည်းငယ်မနှစ်မြို့ဖွယ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်အတော်လေးဆင်တူသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်။ ဤသည်နောက်တဖန်ဖြစ်ကောင်းမြင့်မားသောအသုံးပြုမှုကိုအုပ်စုတစ်စုအတွက်တစ် ဦး ချင်းစီအဘို့အလုံလောက်သောလှုံ့ဆျောခံရမဟုတ်တင်ပြ "သာယာသော" ပုံရိပ်တွေကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုရှာဖွေလေ့ရှိသောသူများအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကြောင့်အစာစားချင်စိတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရာတွင်ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုတသမတ်တည်းပြသခဲ့သည်။3, 7, 8] ။ ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုလေ့လာတွေ့ရှိရလာဒ်များအတွက်အကောင့်စေခြင်းငှါစာရေးသူ '' ရန်တွေ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
4.3 ။ ထိတ်လန့် reflex Module (SRM): သူတို့ကအတော်လေးပိုပြီးမနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်ရှာတွေ့စေခြင်းငှါအဖြစ်အနိမ့်နှင့်အလတ်စား porn အသုံးပြုမှုအုပ်စုများတွင်တွေ့မြင်အဆိုပါဆွေမျိုးပိုမိုမြင့်မားလွှဲခွင်ထိတ်လန့်အကျိုးသက်ရောက်မှု, ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုရှောင်ရှားအုပ်စုထဲမှာသေူကရှင်းပြသည်နိုင်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်လည်းရရှိသောရလဒ်များကို [လေ့သက်ရောက်မှုထိတ်လန့်မျက်စိမှိတ်တုံ့ပြန်မှုတိုးမြှင့်ပြသခဲ့ကြသည်အဖြစ်သိရပါအံ့, ဤအုပ်စုများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကိုသူတို့အတိအလင်းကြောင့်အခြားသူတွေအကြားအရှက်၏အကြောင်းပြချက်မှဖြစ်နိုင်သည်ဖော်ပြထားထက်ပိုမိုညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ကြဘူး, ကြောင့်လေ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမှဖြစ်မည်အကြောင်း41, 42].
36) အမျိုးသားများအတွက်များထဲတွင်ဆိုက်ဘာဆိုးသွမ်းအတွက်တိုးမြှင့်ပါဝင်ပတ်သက်မှုမှဦးစီးဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသွေးဆောင် သာ. ကွီးမွတျ (ထိတွေ့မှုCheng & Chiou, 2017)
အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ထိတွေ့မှုလေ့လာမှုနှစ်ခုတွင်အောက်ပါအချက်များဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ၁) ပိုမိုနှေးကွေးသောလျှော့စျေးလျှော့ချခြင်း (ဆန္ဒပြည့်မှုအားနှောင့်နှေးနိုင်ခြင်းမရှိခြင်း)၊ ၂) ဆိုက်ဘာဒုစရိုက်ကျူးလွန်မှုတွင်ပါ ၀ င်မှုပိုမိုများပြားလာခြင်း၊ အတုကုန်ပစ္စည်းများ ၀ ယ်ရန်နှင့်တစ်စုံတစ်ယောက်၏ Facebook အကောင့်ကိုဖောက်ထွင်းရန်။ အတူတူယူခြင်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းသည်လှုံ့ဆော်မှုကိုတိုးမြှင့်စေပြီးအချို့သောအလုပ်အမှုဆောင်တာ ၀ န်များကိုလျှော့ချနိုင်သည် (ချုပ်တည်းခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်း၊ နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ကောက်နှုတ်ချက် -
37) လိင်အင်တာနက် (ပြဿနာ) ကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ခန့်မှန်းအကဲဆတ်သောပစ္စည်း: လိင်အကဲဆတ်သောပစ္စည်းဆီသို့စရိုက်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Motivation and Implicit ချဉ်းကပ်လိုတဲ့သဘောထားကို၏အခန်းက္ပ (Stark et al ။, 2017)
[သာလွန်သောဓါတ်ပြုမှု / ထိတွေ့မှု / စွဲလမ်းမှု] - ကောက်နုတ်ချက်များ။
38) Neurophysiological တွက်ချက်ချဉ်းကပ် (2018) အပေါ်အခြေခံပြီးညစ်ညမ်းစွဲထောက်လှမ်းခြင်း
ဤစာတမ်း၌, EEG သုံးပြီးဖမ်းယူတိုကျရိုကျဧရိယာကနေဦးနှောက်ကို signal ကိုသုံးပြီးတစ်နည်းလမ်းပါဝင်သူ porn စွဲသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ရှိစေခြင်းငှါရှိမရှိ detect လုပ်ဖို့လျာထားသည်။ ဒါဟာဘုံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမေးခွန်းလွှာတစ်ခုဖြည့်စွတ်ချဉ်းကပ်မှုအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ စမ်းသပ်ရလဒ်များစွဲသင်တန်းသားများကို Non-စွဲသင်တန်းသားများကိုနှိုင်းယှဉ်တိုကျရိုကျဦးနှောက်ဒေသတွင်း၌အနိမ့် alpha လှိုင်းတံပိုးလှုပ်ရှားမှုခဲ့ကြောင်းပြသပါ။ ဒါဟာအနိမျ့ဆုံးဖြတ်ချက် Electromagnetic Tomography (LORETA) ကို အသုံးပြု. တွက်ချက်ပါဝါဖြာထွက်ရောင်ခြည်အလင်းတန်းများ အသုံးပြု. ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ theta တီးဝိုင်းလည်းစွဲနှင့် Non-စွဲအကြားကွာဟမှုလည်းမရှိပြသပါ။ သို့သော်ဂုဏ်ထူး alpha တီးဝိုင်းအဖြစ်သိသာမဟုတ်ပါဘူး။
39) မီးခိုးရောင်ကိစ္စလိုငွေပြမှုနှင့်ပြဿနာ hypersexual အပြုအမူ (2018) နဲ့တဦးချင်းစီတို့တွင်သာလွန်ယာယီ gyrus အတွက်ပြောင်းလဲငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ်ဆက်သွယ်မှု
[ယာယီ cortex မီးခိုးရောင်ကိစ္စလိုငွေပြမှုများ, ယာယီ cortex နှင့် precuneus & caudate အကြားပိုမိုညံ့ဖျင်းသောအလုပ်လုပ်နိုင်မှုဆက်သွယ်မှု] - ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များနှင့်လိင်အကျင့်စွဲသူများအား (“ ပြproblemနာဆိုင်ရာ hypersexual အပြုအမူ”) ကိုဂရုတစိုက်စစ်ဆေးသော fMRI လေ့လာမှု။ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်စွဲသူများတွင် - ၁) ယာယီအစက်အပြောက်များ၌လိင်မှုကိစ္စလျော့နည်းသွားခြင်း (လိင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုများကိုဟန့်တားနှောက်ယှက်သောဒေသများ)၊ 1) ယာယီ cortex ၏အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုလျှော့ချခြင်း (precuneus) လျှော့ချခြင်း (အာရုံစူးစိုက်မှုကိုပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းတွင်ပုံမှန်မဟုတ်သောအရာအားဖော်ပြခြင်းဖြစ်နိုင်သည်); 2) ယာယီ cortex အလုပ်လုပ်သောဆက်သွယ်မှုကိုလျှော့ချခြင်း (Impulses သတင်းအချက်အလက်များကိုအပေါ်မှအောက်သို့ထိန်းချုပ်ခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်) ။ ကောက်နုတ်ချက်များ
လက်ျာ cerebellar ဂလင်းတမျိုးနှင့်လက်ဝဲ STG နှင့်အတူလက်ဝဲ cerebellar ဂလင်းတမျိုး၏တိုးမြှင့်ဆက်သွယ်မှုအတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စပျတိုးကိုလည်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည် ... ။ သို့အတွက်ကြောင့် cerebellum အတွက်တိုးမြှင့်မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်နှင့် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု PHB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
40) အင်တာနက်ညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုရောဂါဆီသို့သဘောထားတွေ: ညစ်ညမ်းလှုံ့ဆော်မှုဖို့အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်ကွာခြားချက်များ (2018)
[သာ။ ကြီးမြတ် cue reactivity ကို / sensitization, တိုးမြှင့်တပ်မက်] ။ ကောက်နုတ်ချက်များ
စာရေးသူအတော်များများသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းရောဂါ (IPD) ကိုစွဲလမ်းစေသောရောဂါဟုသတ်မှတ်ကြသည်။ ပစ္စည်းနှင့်ပစ္စည်းမဟုတ်သောရောဂါများကိုပြင်းထန်စွာလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်သောယန္တရားတစ်ခုမှာစွဲခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များအပေါ်အာရုံစိုက်ထားသောဘက်လိုက်မှုဖြစ်သည်။ အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုဟာ cue ကိုယ်တိုင်၏အခြေအနေကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်အဓိကအားဖြင့်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များကြောင့်တစ် ဦး ချင်းစီ၏သိမြင်မှုဆိုင်ရာသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များဖြစ်သည်။ တစ် ဦး ချင်းစီတွင် IPD လက္ခဏာများသွယ်ဝိုက်သိမှတ်ခံစားမှုများအပြင် cue-reactivity နှင့်တပ်မက်မှုတို့သည်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းတိုးပွားလာသည်ဟု I-PACE မော်ဒယ်လ်တွင်ယူဆထားသည်။ IPD ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု၏အခန်းကဏ္investigကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးပါ ၀ င်သူ ၁၇၄ ဦး ကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့သည်။
အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုကို Visual Probe Task ဖြင့်တိုင်းတာသည်။ ၎င်းတွင်ပါဝင်သူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်ကြားနေရုပ်ပုံများအရပေါ်လာသည့်မြားများကိုတုံ့ပြန်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအားဖြင့်သွေးဆောင်သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်နိုးထညွှန်ပြခဲ့ကြရသည်။ ထို့အပြင် IPD နှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားများကိုတိုတောင်းသော Internetsex စွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်မှုကို အသုံးပြု၍ တိုင်းတာသည်။ ဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များသည်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုနှင့် cue-reactivity နှင့်တဏှာအတွက်အညွှန်းကိန်းများကကမကထပြုထားသော IPD ၏လက္ခဏာပြင်းထန်မှုအကြားဆက်နွယ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြောင့်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်တုန့်ပြန်မှုအချိန်တွင်ကွာခြားသော်လည်းအချို့သောဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကမူ IPD လက္ခဏာများအရလိင်နှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲဘက်လိုက်မှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ရလာဒ်များသည် I-PACE မော်ဒယ်၏စွဲလမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောအချက်များနှင့်ပတ်သက်သောသီအိုရီဆိုင်ရာယူဆချက်ကိုထောက်ခံသည်။ ထို့အပြင် cue-reactivity နှင့် sustanzi အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများတွင်စွဲလမ်းမှုကိုဖြေရှင်းသည့်လေ့လာမှုများနှင့်ကိုက်ညီသည်။
လိင်မှုဆိုင်ရာပုံရိပ်များကိုခေတ္တကြည့်ရှုစဉ်ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းကဆုလာဘ်နည်းသော circuit activation နှင့်ဆက်စပ်နေသည်